Ọ bụ ngwa ọrụ dị egwu maka ndị na - ere ahịa n ’ihi na enwere ike ịchịkọta data ahụ ọsọ ọsọ ma ọfụma. Ihe onyonyo bara uru n'ihi na ụlọ ọrụ nwere ike ịnakọta profaịlụ ha n'otu ntabi anya kama ịnara izu ma ọ bụ ọnwa iji chịkọta nyocha ahụ. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche dị na nyocha ọdịnala nke nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa iji chịkọta ma nyochaa. Ka ọ na-erule oge ị nwetara ụdị nyocha ahụ, onye nwere ike ịzụta gị nwere ike gbanwee ntakịrị. Ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ.
Tags: onye zụrụ yausoro ihe omumuNtanetịnyocha mmaduonyexRobert Kozinets